Umenza kanjani umuntu wesifazane athandane nawe ▷ ➡️ Zitholele Ku-inthanethi ▷ ➡️
Indlela yokwenza umuntu wesifazane athandane nawe. Kuthiwa isimo sokuthatheka singesinye sezikhathi ezijabulisa kakhulu ekuphileni kwethu. Ukuthandana nomuntu wesifazane kunzima kakhulu, futhi ukufeza lokhu kufanele ukhiphe zonke izikhali zakho. Kodwa futhi unganqatshwa nguye, futhi ukuvimbela lokhu ukuthi kungenzeki, sidale lesi sihloko ngamathiphu ayisisekelo ukuze owesifazane wamaphupho akho abone umlingani wakhe womphefumulo kuwe. Ngikufisela inhlanhla!
1 Indlela yokwenza owesifazane athandane nawe step by step
1.1 1. Yilalele
1.2 2. Yiba umnumzane
1.3 3. Gqoka kahle ukuze wenze umuntu wesifazane akuthande
1.4 4. Ungaziqhenyi
1.5 5. Ungakuzibi
1.6 6. Mshayele ngemva kosuku lokuqala ukuze athandane nawe
1.7 7. Hamba kancane
1.8 8. Yiba nomusa kubangani bakho
1.9 9. Qondisa ubuhlobo bakho
1.10 10. Yiba romantic ukuze umuntu wesifazane athandane nawe
1.11 11. Yethule emndenini wakho
Indlela yokwenza owesifazane athandane nawe step by step
Akekho owesifazane ofana nomunye, yingakho amadoda amaningi esaba uma ecela usuku. Abazi ukuthi benze kanjani, ukuthi lo wesifazane angakuthanda futhi bacabanga ukuthi ngeke bakwazi ukukufeza.
Okulandelayo sizokunikeza amathiphu ayisisekelo azokusiza ufeze umgomo wakho thola umuntu wesifazane akuthande.
Bonke abesifazane bayathanda ukukhuluma nokuzwakala. Ngosuku lokuqala ungakhuluma ngezihloko ezingenakubalwa, futhi uma ufuna ukumenza azizwe ekhethekile, lalela konke akutshela kona futhi uxoxe naye. Lesi yisiqalo esihle futhi sizokuxhumanisa ngokuxoxa ngemicabango.
2. Yiba umnumzane
Uma sikhuluma ngokuba umnumzane akusho ukuthi kufanele ube inkosana ebukekayo. Ukuba umnumzane nje ukweletaziphathe ngendlela enesizotha, emnene futhi ecabangelayo. Ngokwesibonelo, vula umnyango wendawo yokudlela noma wemoto ukuze adlule futhi ungasebenzisi amagama ayiziqalekiso noma izisho phakathi nosuku. Futhi, ungacabangi ngisho nokucabanga ukwenza ucansi njengoba bekungeke kwenzeke futhi kudale isimo esishubile. Niyajwayelana, aniwona umbhangqwana.
3. Gqoka kahle ukuze wenze umuntu wesifazane akuthande
Akekho umuntu wesifazane ozocabanga ukuthi indoda empilweni yakhe iyinhlobo egqoka izingubo ezingcolile futhi enephunga elibi. Amadoda ashefiwe noma anentshebe elungiswe kahle, enamakha, anezinwele ezihlanzekile nezingubo ezigqama ngenxa yokuhluzeka kwazo ziyimininingwane ezuza amaphuzu amaningi okubuka kowesifazane omthandayo.
Kukhona amadoda athanda ukubukisa ngemisebenzi yawo noma izinto ezibonakalayo, kodwa lokhu Akuyona into okufanele uyenze phambi kowesifazane ohlose ukumnqoba. Futhi akafuni ukhulume ngezinto ongenazo, ngoba nakuzo zombili izimo ngeke ukwazi ukumjabulisa.
Uma uthole owesifazane ophelele futhi ufuna ukuthi athandane nawe, kufanele ukufake engxoxweni nabangani bakho. Zama ukukhuluma ngezihloko ozithandayo naye, futhi umvumele aveze umbono wakhe. Ukukhuluma ngezimoto, ibhola lezinyawo nabanye abantu besifazane akubuzwa. Qiniseka ukuthi abangani bakho nabo bayakwazi ukugcina ukuthula kwabo futhi banezihloko ezihlukene abangakhuluma ngazo.
6. Mshayele ngemva kosuku lokuqala ukuze athandane nawe
Uma umfonela ngosuku olungemva kosuku lwakho lokuqala, ayanda kakhulu amathuba okuthi athandane nawe. Ungadlali isiphazamiso, akusizi ngalutho. Okufanele ukwenze ukumfonela uzwe ukuthi unjani, umtshele ukuthi ukuthandile ukuhlangana naye futhi ufuna ukumbona futhi. Uma efuna ngempela ukukwazi kangcono, uyosamukela isimemo. Ungameqisi kuze kufike usuku lwesibili nemiyalezo eyinkulungwane ngocingo, izinkundla zokuxhumana noma nge-imeyili.
7. Hamba kancane
Amadoda amaningi anethemba lokuthi ngemva kosuku lokuqala, kuzokwenzeka okuthile okusondelene kakhulu. Kodwa ubuhlobo obuseduze budinga isikhathi, inhlonipho, umthwalo wemfanelo, nokuzibophezela. Mhloniphe ngaphezu kwakho konke okunye. Indoda ekucabangelayo lokhu, iyasihlonipha isinqumo kanye nesikhathi esihlongozwe ngomunye umuntu.
8. Yiba nomusa kubangani bakho
Ukwazi umbuthano wabangani bakho cishe kuwumkhuba, futhi yilapho ozothola khona ukuvunyelwa noma ukungavunyelwa kubo. Lokhu kubaluleke kakhulu kuye, ngakho yiba nesizotha futhi ube nobungane. Khuluma nabo ngaphandle kokwesaba ukuthi ungubani ngempela. Ekugcineni, ukuba sobala ngangokunokwenzeka kuyinto enhle kuwe.
9. Qondisa ubuhlobo bakho
Lapho uthatha isinqumo sokuba nowesifazane, kufanele ucace ngalokho okulindele ebudlelwaneni. Uma ungaliboni ikusasa naye, qeda ukuthembisana kwakho, kodwa ungabi naye ngenxa yobuhlungu noma ukunethezeka. Uma, ngakolunye uhlangothi, ufuna kube ngeyakho kuze kube phakade, shada. Kulula kanjalo. Abesifazane bayathanda ukwazi lapho benyathela khona.
10. Yiba romantic ukuze umuntu wesifazane athandane nawe
Ukuba nothando akukona ukushelela. Romanticism kuyinto inhlanganisela yezenzo ze-chivalrous, njengokukhokha isikweletu sendawo yokudlela, ngezimanga ezincane ezingasukela ekumnikeni imbali ngaphandle kwesizathu sokumethula kwabanye njengentombi yakho (uma eyiyo ngempela).
11. Yethule emndenini wakho
Ukwethula owesifazane omthandayo emndenini wakho kufana nokuvala umshado. Ngakho uma uqinisekile ukuthi ungowesifazane wempilo yakho, hamba. Akudingekile ukulungiselela isidlo sasemini esisemthethweni noma isidlo sakusihlwa ukuze wonke umuntu azane. Kuphela yigqoke njengomlingani wakho ekuhlanganeni komndeni noma ephathini. Kukhululeke kakhudlwana futhi ngeke uzizwe ungavikelekile ngokuhlangana nawo wonke umuntu. Kodwa khumbula ukuthi ungamshiyi eyedwa noma nini.
Uma ufuna ukuphumelela wenze umuntu wesifazane athandane nawe, thuthukisa indlela yokuba ehlanganisa zonke lezi zimfanelo ebuntwini bakho. Siyakuqinisekisa ukuthi owesifazane wamaphupho akho ngeke akwazi ukumelana nokuba nosuku nawe futhi, ngethemba, ukuba konke eceleni kwakho.
Uma ufuna ukuqhubeka nokwandisa ulwazi lwakho, vakashela zonke ezinye izindatshana ze- thola.online